Forrester dia naminavina fa ny fandaniana marketing amin'ny Affiliate dia hitombo hatramin'ny 4 miliara dolara amin'ny taona 2014, ary hitombo amin'ny tahan'ny fitomboana 16% isan-taona. Ny iray amin'ireo fanapahan-kevitra noraisinay teo am-piandohana tamin'ny CircuPress dia ny fampifanarahana ny mpampiasa rehetra. Tamin'izany no nandefasana mailaka, raha nisy mpamaky nisoratra anarana taorian'ny fipihana ny rohy ampiasana azy, dia nahazo valisoa ilay nandefa ilay mailaka. Ity dia paikady izay nipoaka niaraka tamin'ny sehatra toa an'i DropBox… aiza
WWW na tsia WWW ary pejypeed
Asabotsy, Jona 26, 2010 Alakamisy, Desambra 5, 2013 Douglas Karr
Nandritra izay volana vitsivitsy izay dia niasa nanatsara ny fotoana fanefan'ny tranokalako aho. Ataoko izany mba hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny ary koa hanampiana ny fanatsarana ny motera fikarohana. Nanoratra momba ny sasany tamin'ireo fomba nampiasako tamin'ny fanafainganana ny WordPress aho, saingy nanova ireo orinasa mpampiantrano (ho Mediatemple) ary nampihatra ny serivisy S3 an'ny Amazon momba ny fampiantranoana ny sariko. Vao avy nametraka ny WP Super Cache ihany koa aho tamin'ny tolo-kevitry ny namana, Adam